Shiinaha Lauryl Dimethyl Amine Oxide, CAS NO.1643-20-5, warshad OA-12 iyo soosaarayaasha | Kiimikooyinka Kerui
Magaca ganacsiga: OA-12
Guryaha & Codsiyada:
OA-12 waa nooc ka mid ah dusha sare ee 'zwitterionic surfactant', dareere hufan oo aan midab lahayn, dusha sare ee kaftanka daciifka ah, kaftanka ku jira dhexdhexaadka aashitada, nonionic-ka dhexdhexaadka ah ee alkaline, ku milma biyaha iyo dareeraha dabiiciga ee polar-ka, waxyarna ku milma dareeraha organic nonpolar.
OA-12 waxay leedahay dhumuc aad u fiican, anti-ma guurto ah, jilicsan, sunta iyo waxqabadka xoojinta xumbada.
OA-12 waxay leedahay waxqabad yar oo xanaaq leh, taas oo kaliya aan si wax ku ool ah u yareyn karin cuncunka cuncunka cuncunka, laakiin sidoo kale leh bakteeriyada, kala firdhinta Ca-saabuunta, u nuglaanta nabaad-jabka noolaha iyo wixii la mid ah.
OA-12 waxaa badanaa loo isticmaalaa shaambo taas oo timaha ka dhigaysa mid jilicsan, oo si fudud loo shanleeyo, xumbo fiican, qurux qurux badan. OA-10 sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa weelka miisaska, gogosha, dhismaha derbiga dibedda iyo dusha kale ee adag, wakiilka nadaafadda si loo siiyo alaabooyin ay isku dhuuqaan, u yareeyaan kicinta iyo is dhexgalka.
OA-12 waxay leedahay faa iidooyinka qiyaasta oo kayar, waxtarka sare, qoyn xoog leh marka la barbar dhigo 6501 dhaqameedka.
50kg iyo 200kg durbaan caag ah. Ku kaydi hal sano qolka har leh iyo meel qalalan.
Ka fogow taabashada isha iyo maqaarka, markii aad la xiriirto, biyo raac.